← Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti
Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera →
Nuti Yesus isa du’a ka’ee isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla.
MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaa ba’uf mee qopha’i.
MEE ITTI YAADII: Jireenya kee keessatti gafa wanti hundinu hiika waan dhaabe sitti fakkatu jira? Maaltu abdi kee siif haareessu danda’a ree?
SEENSA: Duka butooti Goofta, Gooftan issanii hamina jaban jala fudhatame, du’a gar-male ta’etti dabarfame abdi kutani turan. Issan keessa reefa Goofta issani dibuuf gara awwaala isa dhaqani. Dubbin garu gara-gale waan issani dagatani irranfatani ta’e argan. Mee Luqaas 24:1-12tti dubbiis.
Dhagichi awwalalicha sun maaliif waan gargalfame siitti fakkata? Yesusn du’a kaasuuf dhagicha gargalchuun barbachisa sitti fakkataa? Yookis gargaluun dhagicaha bu’an isaa nuuf ta’ina jette ni yaadaa?
Jechi “Isa jiraataa maaliif warra du’an keessa barbaaddu? ” jedhu maal siitti dubbata?
Ati isa jiraata warra du’an keessa barbade bekta?
Isa du’a warra jiraata keessa wo?
Yesus inni jiraataan akkata kamiin gara kee dhufe? Dhufatin isa seena kee attamin geedare? Immo jireenyi kee akkuma durii ti?
Dhufatiin Goofticha siif hiika maalii qaba?
Goocha Gooftan siif godhe kana attam goota? Ofuma keef qabate hafta immo oddu gaarii kana wara kaan hundumaatti odeessita?
Dubbi Goofticha hiranfachun attam isaan miidhe sitti fakkataa (24:8)?
Mi’aa jireenya isa karaa Goofta Yesus siif kennameef Waaqayyoof galata galchi. Gaaruumma siif godhame namoota biraaf dhugaa ba’uf hubana fi humna kadhadhu.
Gooftan fayyina erga siif kenne booda dhimma maaliif biyya lafaa kana keessatti si hambise sitti fakkata? Waaqayyo jireenya keetiif akkeka attami qaba lata? Yaada Waaqayyo siif qabu beeku fi isaan jirachuuf maal gocha jirata?
Waaqayyo akka namni hundinu gara isa barru fi gara fayyina dhufu barbaada. Kanafu wanta gad nu ittisuu fi nu dangeesu barbadu hunduma gargalche hojji isaa isa dinqisiisa nuti agarsiisa. Yeroos nuti isa arguu fi hubachu dandeenya. Lafaa nuti iddo du’atti jenne reefa barbachu dhufnetti jireenya nuti agarsiisa. Akkasiin seena keenya geedara. Gafaas sodaan keenya hafe nuti warra ija jabinaan dhugaa banu tana.
Dubbin dhuma dubbi jireenya ti male dubbi du’a miti. Duni mo’ameera. Yesus du’a ka’eera. Dhagaan du’an nuu sodachiisuf danga ta’e dhabate gargaleera. Nutis dhuga batu Goofta isa du’a mo’ate ka’ee sana taneeraa. Galani Waaqayyoof haa ta’u! Amen.
Qaraaniyoo gubbaatti dhiiga kee lolaaftee
lsa n’a hidhettii cubbuuttii na hiikte
Himee illee hin fixu Gooftaa ko gocha kee
Waan na fayyifatteef Yesus galata kee
Waan na fayyifatteef Yesus galata kee!
Posted in Kakuu	Tagged dhagici gargaleera, du'a ka'u, isa jiraata, ka'eera	permalink